4.10.20 ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် – Mason ဆိုကျောင်းများ COVID-19 ဌာနချုပ်
COVID-19 & MCS Updates / အားဖြင့် mccormickc
ငါတို့ရှိသမျှသည်မကြုံစဖူးသောကာလ၌အသက်ရှင်နေကြပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, လူမှုရေးအရ, နှင့်ပညာရှင်ပီသစွာ, သိသာသည်. MCS သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ယဉ်ကျေးမှုလမ်းညွှန်ကိုဤ အချိန်မှစ၍ အသက်ရှင်ရန်နှင့် Comet Cares ချဉ်းကပ်မှုကိုသင်ကြားခြင်းနှင့်သင်ယူခြင်းကိုထင်ဟပ်စေရန်ကတိက ၀ တ်ပြုထားသည်. ကျွန်ုပ်တို့၏ Comet Cares ချဉ်းကပ်မှုကကျွန်ုပ်တို့အားသနားကြင်နာတတ်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်, တုံ့ပြန်မှု, နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းသားများနှင့်မိသားစုများ '' ထူးခြားတဲ့အခြေအနေများနှင့်အခြေအနေများမှသာတူညီမျှ.
ကျနော်တို့အသစ်တစ်ခုကိုဝေးလံခေါင်သီသင်ယူမှုအတွေ့အကြုံမှချိန်ညှိနေစဉ်, ကျွန်ုပ်တို့၏အာရုံသည်ကျောင်းသား၏သင်ယူမှုနှင့်ကျောင်းသားများ၏ကောင်းကျိုးကိုသေချာစေရန်ပထမ ဦး ဆုံးနှင့်အဓိကထားသည်. ဒီမကြုံစဖူးအချိန်ကာလအတွင်း, ကျောင်းသားများအဆင့်သည်ကျောင်းသားသင်ယူခြင်း၏အလယ်တန်းဖြစ်သည်.
ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းအဖွဲ့များအကြားခိုင်မာသောဆက်ဆံရေးနှင့်ပွင့်လင်းသောဆက်သွယ်ရေး, ကျောင်းသားများ, နှင့်မိသားစုများမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည် သင်ယူမှုအတွက်ကျောင်းသားများ၏ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုထောက်ပံ့ဘို့ဒြပ်စင်.
ကျောင်းသားများနှင့် ၄ င်းတို့၏မိသားစုများသည်ဤကမ္ဘာချီအကျပ်အတည်းကာလအတွင်းအတွေ့အကြုံများစွာရရှိသည်. သူတို့ရင်ဆိုင်နေရသောစိန်ခေါ်မှုများကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်း, သူတို့ထိန်းချုပ်မှုထဲကဖြစ်ကြောင်းကို, ကျွန်ုပ်တို့၏အဆင့်အတန်းဆိုင်ရာမူဝါဒများသည်မည်သည့်ကလေးကိုမျှမထိခိုက်စေရ.
အတန်း K-5 ဝေးလံခေါင်ဖျားသင်ယူမှုနှင့်အဆင့်
မှတ်စု: အဆင့် K-5 ၌တည်၏, ကျောင်းသားများသည်ရိုးရာအဆင့်ထက်အစီရင်ခံစာကဒ်များပေါ်တွင်စံနှုန်းများကိုအခြေခံသည့်ရမှတ်များရကြသည်. စံနှုန်းများကိုအခြေခံသည့်ရမှတ်များသည်ကျောင်းသားများ၏စံချိန်စံညွှန်းများကျွမ်းကျင်မှုဆီသို့တိုးတက်မှုနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုမျှဝေသည်.
ကျောင်းသားများအနေဖြင့်အဝေးမှသင်ယူမှုအတွေ့အကြုံများနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံရန်နှင့်သူတို့၏သင်ယူမှုတွင်တိုးတက်ရန်မျှော်လင့်ရသည်. ကျောင်းသားများသည်လှုပ်ရှားမှုများကိုတုန့်ပြန်ခြင်းနှင့်အီးမေးလ်မှတစ်ဆင့်ပေးပို့သော RLE တာ ၀ န်များကိုပြီးစီးခြင်းအားဖြင့်ကျောင်းသားများသည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုပြသမည်ဖြစ်သည် (K-4) သို့မဟုတ် Schoology အပေါ်တင်ခဲ့သည် (Gr. 5). ကျောင်းသားများအပိုထောက်ခံမှုလိုအပ်ပါက, မိသားစုများ (သို့) ကျောင်းသားများသည်ဆရာနှင့်မေးခွန်းများမေးသင့်သည်, လိုအပ်ချက်များ, နှင့်စိုးရိမ်မှုများ.
အဝေးမှသင်ယူမှုအတွေ့အကြုံများကိုတက်တက်ကြွကြွပါ ၀ င်နေသောကျောင်းသားများသည်ဒုတိယစာသင်ရမှတ်များအတွက်“ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိမည်” ဖြစ်သည်. အဝေးမှသင်ယူနေစဉ်အတွင်းအဆင့် RLE သင်ယူမှုတာ ၀ န်များ / လှုပ်ရှားမှုများသည်ကျောင်းသား၏စံနှုန်းများအပေါ် အခြေခံ၍ ရမှတ်ကိုသာထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်.
ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းအဖွဲ့များသည်ဝေးလံခေါင်သီသောသင်ယူမှုတွင်မပါ ၀ င်သောကျောင်းသားများနှင့်ဆက်သွယ်နိုင်ရန် Comet Cares အားထုတ်မှုပြုလုပ်လိမ့်မည်. ဆရာတစ်ယောက်, အဆောက်အ ဦး အသင်းနှင့်တွဲဖက်။ (အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ, တိုင်ပင်မှူးမတ်များ, သင့်လျော်သည့်နေရာတွင်ပညာတတ်များကိုထောက်ပံ့ပါ), ကျောင်းသားနှင့် RLE သင်ယူမှုနှင့်ပါ ၀ င်မှု / လှုပ်ရှားမှုများတွင်ကျောင်းသားအားမည်သို့ထောက်ပံ့ရမည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ကျောင်းသား၊.
အဝေးမှသင်ယူမှုအတွေ့အကြုံများတွင်မပါ ၀ င်သောကျောင်းသားများ, သို့မဟုတ်နားလည်မှုအခြေခံအဆင့်များကိုမပြပါ, ပိတ်သိမ်းသည့်နေ့၌သူတို့၏နားလည်မှုကိုထင်ဟပ်စေသောစံနှုန်းများကိုအခြေခံသည့်ရမှတ်ကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်. ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းအဖွဲ့များသည်ကျောင်းသားတစ် ဦး စီကိုထောက်ပံ့ရန်အားစိုက်ထုတ်မည်. အကယ်၍ ကျောင်းသားများအနေဖြင့်ကျောင်းမှအထောက်အပံ့များနှင့်အဝေးမှသင်ယူခြင်းတွင်ပါ ၀ င်နိုင်ခြင်းမရှိပါက, ကျောင်းသား၏သင်ယူမှုအတွက်အနာဂတ်ခြေလှမ်းများကိုဆုံးဖြတ်ရန်ကျောင်းအဖွဲ့သည်ကျောင်းသားများ၏မိသားစုများနှင့်ပူးပေါင်းပါလိမ့်မည်.
အတန်းများ 6-12 အဝေးမှသင်ယူခြင်းနှင့်အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း
မှတ်စု: အဆင့်၌ 6-12, ကျောင်းသားများသည်စာမေးပွဲအဆင့်ရသည် (A-F). အတန်းများကိုစာသင်ချိန်တွက်ချက်သည်, စာသင်နှစ်တစ်ခုစီ၏အဆုံးမှာချေးငွေကိုချီးမြှင့်ခြင်းဖြစ်သည်. ဒီနှစ်ဒုတိယစာသင်နောက်ဆုံးစာမေးပွဲများရှိလိမ့်မည်မဟုတ်.
ကျောင်းသားများအနေဖြင့်အဝေးမှသင်ယူမှုအတွေ့အကြုံများနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံရန်နှင့်သူတို့၏သင်ယူမှုတွင်တိုးတက်ရန်မျှော်လင့်ရသည်. ကျောင်းသားများသည်သူတို့၏ Schoology သင်တန်းသို့ဝင်ရောက်ခြင်းနှင့် RLE ၏တာ ၀ န်များနှင့်လှုပ်ရှားမှုများအားဖြည့်စွက်ခြင်းအားဖြင့်ထိတွေ့မှုကိုပြသမည်ဖြစ်သည်, သူတို့ကိုအကြောင်းအရာများ၏သူတို့ရဲ့နားလည်မှုကိုသရုပ်ပြရန်ခွင့်ပြုကြောင်းအဆင့်အလိုက်လေ့လာသင်ယူအစိတ်အပိုင်းများအပါအဝင်. အပိုအထောက်အပံ့လိုသည့်ကျောင်းသားများသည်ဆရာနှင့်မေးခွန်းများမေးသင့်သည်, လိုအပ်ချက်များ, နှင့်စိုးရိမ်မှုများ.
အဝေးမှသင်ယူမှုအတွေ့အကြုံများကိုတက်တက်ကြွကြွပါ ၀ င်သောကျောင်းသားများအားဒုတိယစာသင်နှစ်အတန်းအတွက်“ ဘေးကင်းစွာကိုင်တွယ်” လိမ့်မည်. ဝေးလံခေါင်ဖျားသောသင်ကြားနေစဉ်အတွင်းမည်သည့်အဆင့်အလိုက်သတ်မှတ်ထားသောမည်သည့်တာ ၀ န်သည်၊ မည်သည့်လုပ်ဆောင်မှုမှမဆိုကျောင်းသားတစ် ဦး ၏ဒုတိယနှစ်စာသင်ခန်းအတန်းကိုထိခိုက်စေသည်, i.e. သူတို့ဝေးလံခေါင်ဖျားသင်ယူမှု၏အစမှာရှိခဲ့ရာမှသူတို့ရဲ့တန်းကိုလျှော့ချလို့မရပါဘူး (ပြီလ 6, 2020). အဝေးမှသင်ယူနေစဉ်အတန်း RLE သင်ယူမှုတာ ၀ န်များ / လှုပ်ရှားမှုများသည်ကျောင်းသား၏အဆင့်ကိုထိန်းသိမ်းရန်သို့မဟုတ်မြှင့်တင်ရန်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းအဖွဲ့များသည်ဝေးလံခေါင်သီသောသင်ယူမှုတွင်မပါ ၀ င်သောကျောင်းသားများနှင့်ဆက်သွယ်နိုင်ရန် Comet Cares အားထုတ်မှုပြုလုပ်လိမ့်မည်. ဆရာတစ်ယောက်, အဆောက်အ ဦး အသင်းနှင့်တွဲဖက်။ (အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ, တိုင်ပင်မှူးမတ်များ, သင့်လျော်သည့်နေရာတွင်ပညာတတ်များကိုထောက်ပံ့ပါ), ကျောင်းသားနှင့် RLE သင်ယူမှုနှင့်တာဝန်များ / လှုပ်ရှားမှုများတွင်ကျောင်းသားအားမည်သို့ထောက်ပံ့ရမည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ကျောင်းသားနှင့်မိသားစုနှင့်ဆက်သွယ်ရန်ကြိုးစားမှုအားလုံးကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်။
အဝေးမှသင်ယူမှုအတွေ့အကြုံများတွင်မပါ ၀ င်သောကျောင်းသားများ, သို့မဟုတ်နားလည်မှုအခြေခံအဆင့်များကိုမပြပါ, လက်ခံရရှိလိမ့်မည် "မပြည့်စုံ။ " ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းအဖွဲ့များသည်ကျောင်းသားတစ် ဦး စီကိုထောက်ပံ့ရန်အားစိုက်ထုတ်မည်. အကယ်၍ ကျောင်းသားများအနေဖြင့်ကျောင်းမှအထောက်အပံ့များနှင့်အဝေးမှသင်ယူခြင်းတွင်ပါ ၀ င်နိုင်ခြင်းမရှိပါက, ကျောင်းသား၏သင်ယူမှုအတွက်အနာဂတ်ခြေလှမ်းများကိုဆုံးဖြတ်ရန်ကျောင်းအဖွဲ့သည်ကျောင်းသားများနှင့် / သို့မဟုတ်မိသားစုနှင့်အတူပူးပေါင်းပါလိမ့်မည်.